၁၃။ ကွန်ပြူတာအခြေခံ အပိုင်း (၄) ~ မောင်သက်ဝေ
၁၃။ ကွန်ပြူတာအခြေခံ အပိုင်း (၄)
ဒီနေ့Monitor အကြောင်း ရှင်းပြပါမယ်…
A monitor displays text and images generated by the video card.
A video card is also calledavideo adapter, video board, graphics adapter and graphics board or graphics card.
Monitor ဟာ Graphic Card ကြောင့် စာတွေ၊ ပုံတွေ မြင်ရတာပါ…
Graphic Card ကို Video Adapter, Video Card, Video Board, Graphic Adapter စသဖြင့် ခေါ်ပါတယ်…
The size ofamonitor is measured diagonally across the screen. Common monitor sizes are 14, 15, 17 and 21 inches.
Monitor အရွယ်အစားကို Monitor ကို ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာပါတယ်… များသောအားဖြင့် ၁၄-လက်မ၊ ၁၅-လက်မ၊ ၁၇-လက်မ၊ ၂၁-လက်မတို့ ကို အသုံးပြုပါတယ်…
A flat-panel monitor uses Liquid Crystal Display (LCD), which is the same type of display found in most digital wristwatches.
ယခုအခါ Liquid Crystal Display (LCD) သုံးတဲ့ Flat-Panel Monitor များကို အသုံးပြုပါတယ်…
A screen saver isamoving picture or pattern that appears on the screen when you do not useacomputer foraperiod of time.
Screen savers were originally designed to prevent screen burn, which occurs when an image appears inafixed position foraperiod of time.
Screen Saver ဆိုသည်မှာ မိမိကွန်ပျူတာကို ခေတ္တအသုံးမပြုသောအချိန်တွင် Screen ကို Burn မဖြစ်စေရန် ရွေ့ ရှားနေသော ရုပ်ပုံများ ထည့်ထားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်…
Resolution determines the amount of informationamonitor can display.
Resolution is measured by the number of horizontal and vertical pixels. A pixel is the smallest element on the screen. Pixel is short for picture element.
Resolution ဆိုတာ Monitor မှာ ပြနေသော ရုပ်ပုံများရဲ့ အရည်အသွေးကို ပြတာပါ…
Resolution ကို အလျားလိုက်နဲ့ဒေါင်လိုက် Pixels များနဲ့ဖော်ပြပါတယ်…
A monitor lets you adjust the resolution to suit your needs.
Monitor Resolution ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်…
Lower resolutions display larger images so you can see information more clearly.
Resolution နည်းရင် ပုံများဟာ ပိုကြီးပြီး အချက်အလက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်…
Higher resolutions display smaller images so you can display more information at once.
Resoution မြင့်ရင်တော့ ပုံများဟာ သေးငယ်ပြီး အချက်အလက်များကို ချက်ခြင်း ပြပေးနိုင်ပါတယ်….
The number of colorsamonitor can display determines how realistic images appear onascreen. More colors result in more realistic images.
Monitor Screen ပေါ်မှာ အစစ်အမှန်ပုံရိပ်များပေါ်တာကို အရောင်အရေအတွက်နဲ့တိုင်းတာ ဖေါ်ပြပါတယ်…
Video Graphics Array (VGA) monitors display 16 colors ataresolution of 640x480. This is the minimum standard for computer systems.
ယခင်က VGA (Video Graphic Array) ဟာ အရောင်-၁၆ မျိုးသာပါပြီး Resolution မှာ 640x480 Pixels သာ ရှိပါတယ်…
Super Video Graphics Array (SVGA) monitors display more colors and higher resolutions than VGA monitors. Most new computer systems offer SVGA.
ယခုအခါ SVGA (Super Video Graphics Array) Monitor များကို အသုံးပြုပြီး Resolution ပိုမြင့်ပါတယ်…
အရောင်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခေါ်အဝေါ်လေးသိရန် တင်ပြပါတယ်…
16 Colors (4-bit color)
256 Colors (8-bit color)
16,777,216 Colors (24-bit color)
A modem lets computers exchange information through telephone line.
A modem translates computer information intoaform that can transmit over phone lines.
Modem ဆိုတာ တယ်လီဖုံးလိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းလို့ ရတဲ့ အရာလေးပါ…
You do not needaseparate phone line to useamodem. You can use the same phone line for telephone and modem calls. If your telephone and modem share the same line, make sure you turn off the call waiting feature when using your modem, since this feature could disrupt the modem connection.
Modem ကို အသုံးပြုဖို့သီးခြား တယ်လီဖုံးတပ်ဆင်ရန် မလိုပါ… အသုံးပြုနေသော တယ်လီဖုံးကိုပင် တယ်လီဖုံးရော Modem ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်… လိုင်းတစ်ခုထဲကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် Modem အသုံးပြုချိန်မှာ တယ်လီဖုံးမှ Call waiting feature ကို ဖြုတ်ထားရပါတယ်…
The receiving modem translates the information it receives intoaform the computer can understand.
Modem က ကွန်ပျူတာက နားလည်အောင် အချက်အလက်များကို လက်ခံ ပြောင်းလဲပေးပါတယ်…
A modem lets you connect to the Internet. This lets you accessavast amount of information and meet thousands of people with similar interests.
Modem ဟာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
When traveling or at home, you can useamodem to access information stored on the network at work. You can send and receive electronic messages (e-mail) and work with office files.
မိမိအိမ်နဲ့အလုပ်ကို Network ချိတ်ထားမယ်ဆိုရင် E-mail (Electronic Mail) နဲ့Office Files များကို ပို့ တာနဲ့ လက်ခံတာကို Modem ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
Most modems can send and receive faxes. Withafax modem, you can createadocument on your computer and then fax the document to another computer or fax machine.
Whenacomputer receivesafax, the document appears on the screen. You can review and print the document, but you cannot edit the document unless you have Optical Character Recognition (OCR) Software.
Modem ကို အသုံးပြုပြီး Fax များကို ပို့ တာ နဲ့လက်ခံတာကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်… မိမိကွန်ပျူတာမှာ စာရိုက်ပြီး Fax modem မှတစ်ဆင့် တခြားကွန်ပျူတာနဲ့Fax Machine ကို ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်…
An internal modem isacircuit board that plugs into an expansion slot inacomputer. This type of modem is generally less expensive than an external modem, but is more difficult to set up.
You can see the edge of an internal modem at the back ofacomputer.
Internal Modem ဆိုတာ Circuit Board ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ Casing ထဲရှိ Expansion slot မှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်…
Internal Modem က External Modem ထက် ဈေးသက်သာပေမဲ့ Set up လုပ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်…
An external modem isasmall box that plugs into the back ofacomputer. An external modem takes up room on your desk, but you can use this type of modem with more than one computer.
Status lights on the modem tell you about the current transmission. For example, the RD light is on when the modem is receiving data.
External Modem ကတော့ သေးငယ်တဲ့ Box လေးပါပဲ… External Modem ကတော့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထက် ပိုသုံးနိုင်ပါတယ်…
The speed ofamodem determines how fast it can send and receive information through telephone lines.
Modem speed is measured in bits per second (bps). You should buyamodem withaspeed of at least 56,000 bps (56 Kbps).
Buy the fastest modem you can afford. Faster modems transfer information more quickly.
Modem ရဲ့ Speed ကို bits per second (bps) နဲ့တိုင်းတာပါတယ်… အနည်းဆုံး 56Kbps (56-Kilobits per second) ရှိတဲ့ Modem ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် မိမိအိမ်တွင် အင်တာနက်တပ်ဆင်လိုပါက-
၁။ ကွန်ပျူတာတစ်စုံ (Computer Case, Monitor, Keyboard, Mouse)
၂။ Modem ရှိရပါတယ်… Internal Modem or External Modem ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
၃။ Digital Telephone Line ရှိရပါမယ်…
၄။ အင်တာနက်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေသော Internet Service Provider ရှိရပါမယ်…
၅။ မိမိအိမ်တွင် အင်တာနက်ကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထက်ပိုမို ချိတ်ဆက်လိုပါက ကွန်ပျူတာများတွင် Network Interface Card တပ်ဆင်ထားရပါမယ်…
(Network နဲ့ ပတ်သက်၍ နောင်တွင် အသေးစိတ် ရှင်းပြပါမယ်…)
လွမ်းရေးထားတာကို သေချာဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ မေးခွန်းလေး ပြန်မေးချင်ပါတယ်…
မိမိအသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Operating System Software က ဘာလဲ ?
မိမိကွန်ပျူတာမှာ ဘာ Application Software တွေ တင်ထားပါသလဲ?
မိမိအသုံးပြုတဲ့ CPU က ဘာအမျိုးအစားလဲ?
Harddisk က ဘယ်လောက်ရှိသလဲ? (GB)
RAM ကရော ဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲ?(MB or GB)
DVD R/W တပ်ဆင်ထားသလား?
CD R/W တပ်ထားတာလား?
Graphic Card ကရော ဘာအမျိုးအစားလဲ?
Monitor Resolution ဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲ? သိချင်ပါတယ်…